Ny vato misakana ny famonjena | FJKM Amboniloha
Ny vato misakana ny famonjena
Mofon’aina 18 Septambra 2014
Manao sary an’ohatra momba ny hadraisana ny olona ao amin’ ny fanjakan’Andriamanitra i Jesoa. Asehony amin’ ny alalan’ny endrika fanasana izany ka azo itarafana ny vato misakana ny famonjena.
Ny famatoran’ny filan-karena : (and.18.19)
Niala tsiny avokoa izay nomena fanasana. Tao ny nividy tany, tao ny nividy omby. Sarin’ny fitiavan-karena izany. Fananana eo am-pelatanan’ny olona ireny ary tsy hoe tsy ilaina. Ilam-pitandremana kosa mba tsy hanaovantsika azy ireny ho sakana tsy handraisana ny famonjena. Ireny no tsy handehanantsika miangona ; ireny no tsy handraisantsika adidy ao am-piangonana, satria matahotra isika ndrao ho very harena ! Sakana tsy handraisan’ny olona famonjena ny harena ka tandremo !
Ny fanarahana ara-bakiteny ny lalàna (and.20)
Nataon’i Jesoa ohatra eto ny amin’ ny lehilahy iray anisan’izay nantsoina ho amin’ ny fanasana. Niala tsiny izy : « Efa nampaka-bady aho ka tsy afaka mankany ! » Voalazan’ny lalana ny hijanonany ao an-trano hampifaly ny vadiny aloha, ho an’izay nampaka-bady (Deo 24,5), koa noraisiny ara-bakiteny izany. Te hiseho izy fa nanaraka ny voalazan’ny lalàna, ka te hiseho ho afa-tsiny. Azo raisina ho fitiavana tafahoatra ny ankohonana koa anefa izany. Natakalony ny vadiny ny baikon’ny Tompo. Vato misakana tsy handraisam-pamonjena ireo antony ireo, koa tandremo !
Moa misy endrika hafa tsy voalaza eto ve ireo sakana tsy hahafahan’ny olona mandray famonjena ?
Catégories :	Mofon'aina	/ 0 Réponse / par AnjGab 18 septembre 2014